Usoro ọgwụgwọ na-eme ka ike gwụ, na-eme ka ike gwuo elu
Home / ngwa / Mgbakasị na-esi ike / Itinye n'ọkwa ike
Category: Mgbakasị na-esi ike Tags: isi ike, isi ike ọgwụgwọ, elu ugboro ike hardening elu, mmamiri obia elu, nhazi mmechi mmechi, eme ka ike gwụ elu ọgwụgwọ, elu isi ike eji abanye
Ọkụ na-eme ka ike gwụ Ọgwụgwọ enwere ihu ọma maka akụkụ dị iche iche na-ebu ibu. Ngwa ndị a na-agụnye axles, hụrụ eriri, eriri, stampings, ọkpụkpụ, nkwụ na akụkụ kachasị mma. A na-ejikarị ígwè ígwè siri ike na-eme ihe na-eme ka ọkpụkpụ sie ike, ma enwere ike iji ya na ngwaọrụ ndị ọzọ. Nrụgide nke ụlọ na-agụnye kpochapụ ihe ahụ na okpomọkụ n'elu 723ºC (okpomọkụ austenitic) wee kpoo ígwè ahụ ngwa ngwa, mmiri. Ebumnuche nke ntinye ngwa ngwa a bụ iji gbanwee ihe owuwu nke ígwè iji mee ka ike ya dịkwuo ike, ike ya, na ọgba aghara ya. Akwara ndị a na-emekarị ka obi sie ha ike na-emetụta ọkụ na 0.3% gaa na 0.7% carbon.
nhazi mmechi mmechi
anyị nwere ọtụtụ ihe ngwọta na-eme ka ike gwụ na ebe ndị a:
1. Ngwọta na-eme ka ike gwụ nke akụrụngwa ígwè dịka valves, crankshafts, camshafts, mkpara njikọ na ntanetị agba
2. Ọkụ na-eme ka ike gwụ ọgwụgwọ nke nnyefe akụkụ, dịka ọmụmaatụ CV nkwonkwo, tulips na axle shafts
3. Ngwọta na-eme ka ike gwụ nke nkwusioru akụkụ dị ka ujo na-amị mkpụrụ, iyi na mkpofu
4. Ngwọta na-eme ka ike gwụ nke akuku maka ngwa ngwa ngwa ngwa na ntughari ntughari, dika ihe atụ, ihe nhichaghari na ihe ndi mmadu
5. Ngwọta na-eme ka ike gwụ nke isi iyi na breeki
Ọkụ na-eme ka ike gwụ bụ usoro ọgwụgwọ okpomọkụ nke na-enye usoro a na-achịkwa na nke a na-ahụ maka okpomọkụ na-enweghị kọntaktị na mpaghara metal ma ọ bụ components dị ọkụ. A na-eme okpomọkụ ahụ site n'ime ka ihe eletriki eletrik na-agba n'ime ihe a ga-ewe iwe. Nke a na-enye ezigbo ihe ọkụkụ, nke a na-eche ihu na ngwa ngwa na-emeso ihe omume.
Igwe igwe anaghị agba
Nnukwu ugboro ike na-eme ka ịgbatị usoro usoro